Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay Talo-soojeedin ku aadan Hirgelin Doorasho QOF & COD • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay Talo-soojeedin ku aadan Hirgelin Doorasho QOF & COD
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay Talo-soojeedin ku aadan Hirgelin Doorasho QOF & COD
February 9, 2019 - By: Mohamed Dahir
Golaha wakiilada Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay, tala soo jeedin ku saabsan, hirgelinta doorasho qof iyo cod ah.
Ansixinta ayaa timid kadib markii xildhibaanada golaha wakiiladu ay warbixin ka dhegaysteen guddi loo saaray in ay soo darsaan qabadaha Puntland ka hor taagan qabsoomidda doorashada axsaabta badan oo ka dhacda Puntland.
7 xubnood oo uu ka koobnaa Guddiga ayaa darsay isla markaana u kuur-galay asbaabaha ay Puntland uga qabsoomi weyday doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaana warbixin kadib ay soo jeediyeen in guddigii doorashooyinka ku meel-gaarka ahaa ee Puntland (TPEC) ay sii wadaan shaqada laguna taageero dhaqaalihii ay ku howlgalin lahaayeen doorashada golayaasha degaanka ee Puntland.
Intii uu socday kulanka Baarlamaanka xildhibaannada ayaa soo jeediyay in xukuumaddu ay la timaaddo qorshe cad oo ku qotoma qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Puntland.
Dood dheer kadib Xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntand ayaa cod gacan-taag ah ku ansixiyey tala-soo jeedinta guddiga gaarka ah eeloo xilsaaray hir-gelinta nidaamka axsaabta badan iyo shaqo howleedka guddiga doorashooyinka KMG ah ee Puntland (TPEC).
48 mudane oo soo xaadiray fadhiga waxaa tala-soo jeedinta aqbalay 43 xubnood, 2 xildhibaan ayaa diiday halka 3 kalena ay ka aamustay.
Gudoomiyaha golaha waakiilada Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ugu dambeyn kulanka ka sheegay in uu ansax yahay qorshahan talo soojeedinta ah ee la xiriira hirgelinta nimaadka doorasho ee ku dhisan Axsaabta badan.
Si kastaba xukuumadihii horey u soo maray Puntland ayaa ku guuldareystay in ay hirgeliyaan nidaam doorasho oo qof iyo cod ah inkastoo qaar kamid ah xukuumadihii hore ay muujiyeen iskudayo la xiriira hirgelinta nidaamka ku dhisan axsaabta badan,lamana oga xukuumaddan cusub sida ay u hirgelin doonto nidaamkan doorasho.